तपाइको पार्टनरले यस्तो संकेत देखाउदै छन् ? सम्झनुहोस, पार्टनरले धोखा दिदै छ - News Bihani
सबै व्यक्ति मनको कुरा खोलेर बोल्ने स्वभावका हुँदैनन् । कोही धेरै बोल्छन्, कोही कम । कोही सार्थक कुरा बोल्छन्, कोही गफाडी मात्र पनि हुन्छन् । तपाईंको पार्टनर कम बोल्छन् वा धेरै ? त्यो महत्वपूर्ण भएन । यद्यपि उनी सधै जस्तो तपाईंसँग अन्तरंग कुरा गर्दैनन् भने त्यसमा केही गडबड छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
पार्टनरले आफुसँग बोल्न रुची नराख्नुमा उनकै दोष मात्र हुँदैन, आफ्नो गल्ती पनि हुनसक्छ । त्यसैले पार्टनरले आफुसँग अरुबेला झै स्वभाविक ढंगले कुराकानी गर्न छाडेमा वा कुरा गर्न नचाहेमा तपाईंले त्यसको कारण खोज्नुपर्छ । साथसाथै यसले के पनि संकेत गर्छ भने तपाईंका पार्टनरले तपाईंलाई धोका दिदैछ ।
घर बाहिर धेरै समय विताउनु
श्री पाथिभरा माताको दर्शन गरि के-कस्तो छ तपाइको आजको दिन हेर्नुहोस